Kulan xasaasiya oo Kaadirka iyo Xog-hayaha Guud ee ONLF dhex-maray. | ogaden24
Kulan xasaasiya oo Kaadirka iyo Xog-hayaha Guud ee ONLF dhex-maray.
Xog-hayaha Guud ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia mudane Cabdirixman Shekh Mahdi (Maadey) ayaa kulan xasaasiyo oo arima badan looga dooday Layeeshay Kaadirka Jabhada ee kusugan magalada Jigjiga.
Kulankan oo mudo lasugayay ayaa Xoghayaha Guud ee JWXO mudane Cabdiraxaan Sh Mahdi lagaga dhagaystay warbixin aad udheer oo uu Xoghayuhu kaga warbixiyay marxaladihii uu halganku soomaray mudadii 35ta sano ahayd ee halganku uu soosocday.
Sidoo kale Xoghayaha ayaa Kaadirka JWXO kubogaadiyay kaalinta dahabiga ah ee ay shacabka uhayeen iyo waliba adkaysigii iyo dhabar adaygii badnaa ee ay soosameeyeen, si shacabka Soomaalida Ogadenia xoriyad loogaadhsiiyo taas oo wadadeedii aan laga leexanin.
Xoghayaha Guud ee JWXO mudane Maadey ayaa Kaadirka JWXO kubooriyay sidii ay uga soodhalaali lahaayeen marxalada cusub ee halganku uu galay, taas oo sida uu Xoghayuhu sheegay ubaahan dadaal intii hore kasiibadan, una baahan adkaysi iyo dhabar adayg badan.
Sidoo kale Xoghayaha ayaa sharaxaad dheer kabixiyay qorshayaasha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, iyo habka si nabad ah loogu sii halgami doono.
Dhinaca kale Kaadirka JWXO ee kulanka sooxaadiray ayaa Xoghayaha siiyay talooyin aad ubadan kuwaas oo dhamaantood uu Xoghayuhu calaamadaystay una bogay.
Sidoo kale Kaadirka JWXO ayaa su’aalo aad ubadan waydiiyay Xoghayaha kuwaas oo mudane Cabdiraxaan uu ka qanciyay Kaadirka, Isla markaana uu bogaadiyay sida ay su’aalahooda usoo bandhigeen.
Gabagabadii waxaa si qurux badan kusoo dhamaaday kulankii dhex maray xubnaha Kaadirka JWXO iyo Xoghayaha Guud ee JWXO mudane Cabdiraxaan Sh Mahdi.